Tattoo sawirada iyo macnahooda | Tattoo
Tattoo tattoo, astaan ​​u ah xoog, xoog iyo khatar
Susana godoy | | Waxyaabaha iyo waxyaabaha loo yaqaan 'tattoos'
Shaki la'aan, Tattoo sawiro Waxay ku soo noqnoqdaan khayaaliga dhaqanka tattoo-ga. Taasina waa haddii aan raadineyno astaamo tilmaamaya noocyada hubka ee sida weyn loo isticmaali jiray waqtiyadii hore, waxaan ka heli doonnaa tattoos dhadhanka iyo midabada oo dhan. Waxay nala joogeen sannado badan (tan iyo markii ficil ahaan bilowga sawirka) iyo qodobkaan waxaan dooneynaa inaan kuxirno taariikhdooda iyo macnahooda.
Laakiin, Tattoo sawirada micnaheedu waa maxay? Tooreey sida oo kale, waxay u taagan tahay astaan ​​la xiriirta naf hurid, awood, xoog iyo khatar nafteeda. Dadka go'aansada inay sawiraan toorrey nooc kasta ha ahaadeene, badanaa waxay ku dhiiradaan xaalad adag. inay ahayd inay maraan iyo, xaaladaha ugu fiican, inay awoodaan inay ka gudbaan. Sidaa darteed, Tattoo sawirada ayaa loo tixraaci karaa dhibaatooyin soo maray ama waqti madow oo nolosheena ah.
Shaki la'aan iyo haddii aan raadino waxyaabo kala duwan noocyada iyo tusaalooyinka taatikada toorreeyada, waxaan ogaan doonaa inay aad uga fiican yihiin marka la isku daro walxo kale oo laga sameeyo midab. Taasi waa sababta aan u heli karno iskudhafyo kala duwan oo ah sawir gacmeedyo toorreey ah oo aan sidoo kale ka helno waxyaabo ay ka mid yihiin ubax (ubax), qalbi, madaxyo, masas ama liqitaan.
Dhinaca kale, oo haddii aan tixraacno toorreyda dhiigga ku daadanaysa, waa inaan maanka ku haynaa inay u jeeddo awooddeeda daadinta dhiigga, nuxurka ugu dambeeya nolosha. Sidaa darteed, tixraac ayaa sidoo kale loo sameeyay fikradda dhimashada. Heerkeeda heerka aasaasiga ah ee macnaha, toorreydu waxay u taagan tahay dhimasho lafteeda.
1 Sawirro Tattoo Toorey
2 Micnaha sawirada toorreyda
2.1 Micnaha magaca 'Dagger tattoo'
2.2 Toorey oo kacay
2.3 Toorey iyo mas
2.4 Toorey iyo wadnaha
3 Noocyada taangiyada tattoos
3.3 Dhaqan ahaan
4 Halkee laga helayaa tattoo Tooreey
Sawirro Tattoo Toorey
Micnaha magaca 'Dagger tattoo'
Daggers waa hub sidaas oo ay tahayna, waxay had iyo jeer la xidhiidhaan gacan ku dhiiglayaasha ama dabeecada ugu rabshadaha badan. Laakiin xaaladdan waxaan ku aragnaa mid ka mid ah nashqadaha ugu caansan waana taas sababta macneheedu marwalba u yara duwanaan karo. Tooreygu waxay u taagan yihiin geesinimo labadaba sida is ilaalinta. Isagoo tilmaamaya inuu yahay qof aad u dagaalyahan ah. In kasta oo ay run tahay inay iyaduna dhinaceeda rajo yar tahay sidaan ka faallaynay.
Toorey oo kacay
Markaanu ku soo biirno isla toorrey iyo kacsiga tattoo, waxaan yeelan doonaa macno gebi ahaanba ka duwan waxa aan u malayno. Maaddaama xaaladdan aan ka hadlayno calaamadeyn ka tarjumeysa nolosha weligeed ah ama aan dhimanayn. Sidaa awgeed, nashqad sidan oo kale ah ayaa lagu arki karaa cabirro iyo midabbo kala duwan, laakiin xitaa weheliyaan xarfo hore si loogu sharfo dhammaan dadka muhiimka u ah nolosheena.
Toorey iyo mas
Way noo caddahay haddii aan dooranno macnaha ugu horreeya ee seefta inay noqon doonto allabari ama dhimasho. In kasta oo aan ka hadlayno naqshadaha abeesooyinka, markaa ma hilmaami karno in xayawaankan uu leeyahay astaamo fara badan oo ka soo aargudasho ama khiyaano illaa dareen, dulqaad ama isbeddel, iyo kuwo kale. Laakiin sideen u raadineynaa macnaha tattoo oo leh toorrey iyo mas, waa inaan mar labaad sheegnaa inay noqonayso macnaha dhimashada ama waxqabadka allabariga.
Toorey iyo wadnaha
Aad bay caadi u tahay in lagu arko astaamaha meesha toorreydu ka mudayso wadnaha. In kasta oo aanaan ka daali doonin ku celcelinta in mid kastaa macno cusub siin karo, xaaladdan waxaan ka hadlaynaa jacayl dhammaaday. Laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa khiyaano. Mararka qaar waxaan aragnaa naqshado toorrey ah oo qalbiga ka jaba oo magac ayaa agtiisa ka muuqda. Waxay kaloo tilmaami kartaa taas qalbiga ayaa ku jabaya luminta qof aad jeceshahay.
Noocyada taangiyada tattoos
Haa waa run in tattoo sidan oo kale ah badanaa midabkeedu leeyahay dhammaystir naqshadahaaga. Haddii ay la socoto ubaxyo, midabkiisu waxay soo jiidan doonaan dareenka, ama wadnaha ama xitaa dhakada iyo gorgorka. Waad dooran kartaa codadka la socon doona buuxinta astaamaha dhexdhexaad ama waaweyn. Habka ugu fiican ee lagu doorto naqshadaha casriga ah, ee quruxda weyn iyo macnaha isku midka ah.
Dabcan, ka mid ah midabada ugu caamsan ee hal dhinac, waa inaan muujinaa Naqshadaynta 'Old School' mid kale. Xaaladdan oo kale, sawir gacmeedka toorreyda ayaa lamid ah isbeddelladan. Dabcan, halkan waxay ku lahaan doonaan khadad cufan iyo isku dar ah midabbo wax ku ool ah, halkaas oo toorreyda iyo ubaxuba ay ka mid yihiin mowduucyada ugu caamsan ee qaabkan. Moodo qadiimi ah oo ka soo jeeda dhaqanka Mareykanka, laakiin wali si aad ah u xoog badan maanta.
Dabcan, haddii aan ka hadalno waxa ku saabsan naqshado dhaqameed badan, markaa waa inaan sheegnaa kuwa leh dhammaystirka qalin madow iyo hooska. Runtu waxay tahay in taangiyada toorreyda sidoo kale ay si fiican u aqbasho dhammaystirka sidan oo kale Waxaan ka heli karnaa nashqadaha yar yar ama aan ku dhejin doonno meelaha jirka ee caqliga badan. Laakiin waxaad had iyo jeer heli doontaa eraygii ugu dambeeyay ee aad ku fuliso.
Halkee laga helayaa tattoo Tooreey
Waxaan durba baranay xoogaa yar macnayaasha astaamaha toorreey, iyo waliba qaababka ay qaadi karaan. Marka, haddii aad horeyba ugu qanacday ama ku qanacday, marwalba mid baad ku xiran kartaa fartaada. Waa mid ka mid ah fikradaha aadka loo dalbado, laakiin xaaladdan, waxaad ogaan doontaa inay noqon doonto a naqshad fudud oo yar. Dariiq lagu muujiyo tattoo qarsoodi ah, in kasta oo laga hadlayo gacanta. Ka kooban khadadka khad madow iyo waxoogaa hoos ah. Labada far ee kore iyo dhinacyaduba waxay noqon karaan shiraac ugu fiican.
In kasta oo aysan ka mid ahayn meelaha aan u malayno inay tahay ikhtiyaarka ugu horreeya, haddana waxay ku tusaysaa naqshadaha qaarkood wajiga. Sidaa darteed, astaamaha toorreyda looma daayo gadaal. Way soo noqnoqdaan si ay ugu arkaan iyaga gudaha macbudka ama aagagga gubashada. Mar labaad, sida sawirka faraha, iyaguna sidoo kale waa naqshado fudud oo khad madow ah.
La gacanta hore, waa mid ka mid ah shiraacyada ugu wanaagsan ee loogu talagalay tattoo Tooreey. Naqshadeynta ayaa badanaa cidhiidhi ah laakiin dheer oo leh ikhtiyaarro aan dhammaad lahayn. Tan iyo markii ay xaaladdan tahay, waxaan kala dooran karnaa midabada midabbada badan ee midabada leh ama, la sii joog khad madow iyo kuwa cirro leh. Waa mid ka mid ah qaybaha jirka ee sida ugu habboon ula jaan qaadaya qaabkeenna oo sidaas ah, waxaan u habeyn karnaa sida aan dooneyno.
Xuquuqda xabadka, labada naas dhexdooda, waa mid ka mid ah fikradaha haweenka. Laakiin sidoo kale ragga, oo aan ka labalabeynin inay ku sawiraan toorreyda aaggan jirka ka mid ah. Inaan joogno midigta qaybta dhexe, shiraacku waa ballaaran yahay waxaana ka dooran karnaa dhowr naqshadood. Kuwa ka yimaadda kuwa qiraya toorreyda ama kuwa ku dhammaystiraya ubaxyo, dhakado ama xayawaan. Mararka qaarkood, marka lagu daro in lagu sawiro qaybta dhexe, waxay sidoo kale u muuqan karaan dhinaca laabta, iyagoo xoogaa caqli badan.
La qaybta sare ee gacanta Sidoo kale garabka, sidoo kale waa mid kale oo la tixgeliyo markaan ka fikirno tattoo noocan ah. Laakiin waa run in xitaa haddii ay tahay aaggan sare, wejiga gudaha sidoo kale seef lagu dhejin karo. Sababtoo ah waa ikhtiyaar yar oo muuqda oo had iyo jeer asal ah. Kufiican ragga iyo dumarka labadaba.
Sawirada: Pinterest, @sheilamarcello, inkstinct.co, Anemillus
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Waxyaabaha iyo waxyaabaha loo yaqaan 'tattoos' » Tattoo tattoo, astaan ​​u ah xoog, xoog iyo khatar
Shisheeyaha Waxyaabaha loo yaqaan 'tattoos' si loogu dabaaldego imaatinka xilli-saddexaad
Tattoos Mermaid, midowga u dhexeeya ilaahyada iyo xayawaanka badda